Odisha Tribal Tour- Ngalaba Obodo Nta India. Kpọọ + 91-993.702-7574
Ị ma, 29% nke ndị bi n'ụdị Odisha bụ agbụrụ? Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị mmadụ, na-ahụ n'anya ịhụ ndị ọhụrụ na ịchọta ọdịbendị ọhụrụ, Sand Pebbles 'Odisha Tribal Tour bụ ịga-na nhọrọ. Na agbụrụ dị iche iche nke 62 iji chọpụta, njem nke Odisha na-elekwasị anya n'ọdịnala ochie, omenala ụmụ amaala na obodo nta. Debe njem njem a na-enweghị atụ na ndị agbụrụ, tinyere Odisha Tribal Tour, nke Sand Pebbles nyere ya ma nwee ọdịdị dị nso banyere ọha mmadụ na omenala dị ogologo. Imefu uhuruchi, ka ndị agbụrụ na-agba egwú na Dhemsa nwere ike ịbụ ezigbo ahụmahụ ndụ. Ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ahịa ahịa kwa izu na obodo dị iche iche na Odisha Tribal Tour.
Jikere maka ịme njem, n'ụzọ karịrị echiche gị ma leba anya na omenala na mgbakọ dị iche iche nke Odisha oge ochie ma nwee ahụmahụ pụrụ iche na nke a na-echefu echefu. Gbalịa onwe gị maka njem ị ga - eme nke ga - eme ka ị nwee ahụmahụ njem ọ bụla, ma bụrụkwa ahụmahụ mmụta. Njegharị Obodo Ntugharị na-ejikọta ọdịdị, ịma mma, akụkọ ntụrụndụ, mmemme, ịgba egwu, ememe, nkà, nkà na ịkọ. Obodo nta nke ndị mmadụ, bụ ndị a maara dị ka ebo dị iche iche na-achọkarị banyere ndị obodo ukwu, na nke ọzọ.
Pebbles Sand'Odisha Tribal Tour na-enye Odisha Tribal Tour packages na Odisha Village Tour nke ga-eme ka ị banye njem njem.
Ọnụahịa: 180045 INR (13 Nights Programme | 002 Njegharị)
Bịa na Bhubaneshwar Airport / Ụgbọ okporo ígwè na-agafe na họtel. N'ehihie ụtụtụ gaa na ụlọ nsọ obodo - Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani Temples. N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe nri ụtụtụ gaa Puri na-eleta Dhauli (Shanti Stupa), Hirapur (ụlọ 64 Yogini), Pipli (Applique work village) & Raghurajpur. Na ụzọ na-enwe mmasị na Chita-eserese na mgbidi nke ụlọ. N'abalị na Puri.
Ogologo oge nleta nke mbido nke Onye-nwe Jagannath, Gundicha Temple na ụlọ nsọ Loknath. N'ehihie ụtụtụ, Sun Temple nke Konark (nke a na-akpọkwa Black Pagoda), Beach Chandrabhaga na obodo ndị ịkụ azụ. N'abalị na Puri.
N'ụtụtụ mgbe ụtụtụ gafere Gopalpur site na Barkul. Chi foto ga-apụta na nso Barkul. Gaa na ọdọ mmiri ahụ iji hụ ndị ọkụ azụ na ịkụ azụ maka elekere, nkume na nkume. Gaa na Gopalpur. N'abalị na Gopalpur.
Mgbe nri ụtụtụ gara Rayagada na-aga na nleta mmiri sọlfọ dị ọkụ na Taptapani na nke Tibet na ebe obibi na Chandragiri. N'abalị na Rayagada.
Mgbe nri ụtụtụ, gaa na Soura Tribal Market, ma laghachi na Rayagada. N'abalị na Rayagada.
Mgbe njem ụtụtụ gaa n'ebe ndị Tumudibandha ga-aga na Kutia Kondh Tribes. Ka ha na-alaghachi azụ ahịa ha na Kotgarh. Na ụzọ, ọ bụrụ na oge ruru, gaa Dhokra Casting na Tribal Jewelery na-eme ebe. N'abalị na Rayagada.
N'ụtụtụ mgbe ụtụtụ gasịrị, gaa na Dongria Kondh Market Tribal na Chatikona wee gaa Jeypore na-eleta ndị Desia Kondh na ndị Mali na ụzọ. N'abalị na Jeypore.
Mgbe nri ụtụtụ na-aga Onukudelli ka ị gaa na mpaghara ahịa kacha mma nke Bonda Tribes wee gaa na ndị Gadabas & Didayee Tribes. N'abalị na Jeypore.
Uhuruchi gara aga hụ ahịa ahịa kachasị ahịa nke izu ụka Sanaparoja & Mali na Kundli 65 KMs site na Sunabeda (ọ bụ ahịa mara mma). Mgbe ahụ, gaa Jeypore ịga leta Jagannath Temple na Tribal Museum na Koraput. N'abalị na Jeypore.
Mgbe nri ụtụtụ, ụgbọala gaa Gupteswar ileta Ụlọ Nzukọ Jehova Shiva na ìgwè Dhruba ole na ole. Mgbe ahụ ahịa ha kwa izu na Baligaon. N'abalị na Jeypore.
Mgbe ị gachara nri ụtụtụ, gaa Visakhapatnam. N'ehihie n'ehihie n'ụsọ osimiri. N'abalị na Vizag.
Mgbe nri ụtụtụ gaa n'ụlọ nsọ Simhachalam. Ezumike nke ụbọchị n'efu. N'abalị na Vizag.
Ụbọchị 14: AHỤRỤ
Mgbe nri ụtụtụ, nyefee na Vizag Airport / Rail Station maka ịga n'ihu.
Validity :-( ỤLỌ site na 1st APRIL - 30TH SEPTEMBER, site na 26TH OCT - 14TH DEC 2018 & SITE 16TH JAN TO 31ST MARCH 2019)
Ọnụ onye ọ bụla Ụlọ akụ ego Ụlọ nkwari akụ Ụlọ nkwari akụ Deluxe Ụlọ nkwari akụ
Ndị 02 106500 111000 122000 138200
Ndị 04 71300 75900 86800 103000
Ndị 06 61700 62300 73300 89500
Ndị 08 67500 72300 83200 99400
Ndị 10 61300 65900 76800 93100
Onye ọzọ na-ehi ụra 20350 25850 31350 45650
Validity :-( ỤLỌ site n'aka 1ST OCT - 25TH OCT & site na 15TH DEC 2018 TO 15TH JAN 2019)
Ndị 02 127800 133200 146400 165800
Ndị 04 85500 91000 104000 123600
Ndị 06 74000 74700 87900 107400
Ndị 08 81000 86700 99800 119000
Ndị 10 73500 79000 92000 112000
Onye ọzọ na-ehi ụra 24000 31000 37600 54700
A ga - eji ụlọ ọrụ: -
ebe Ụlọ akụ ego Ụlọ nkwari akụ Ụlọ nkwari akụ Deluxe Ụlọ nkwari akụ
Bhubaneswar Hotel Sapphire Plaza / yiri Hotel La Franklin / yiri Hotel The Crown Mayfair Lagoon
Puri Hotel Naren Palace / yiri Empires / Pride Ananya / Similar Hans Co Co Nkwụ / yiri Egwuregwu Mayfair
GOPALPUR Ugwu nke Oké Osimiri Panthnivas Swosti Palm Resort Mayfair Palm Beach
JEYPORE Ndewo Jeypore Ndewo Jeypore Ndewo Jeypore Ndewo Jeypore
RAYAGADA Ya mere ụwa Ya mere ụwa Ya mere ụwa Ya mere ụwa
VISHAKHAPATNAM Ụlọ ọrụ AKSHAYA / SIMILAR WINSAR PARK / SIMILAR DASPALLA / SIMILAR NOVOTEL / SIMILAR
1) Ọ bụrụ na ime ụlọ anaghị adị na ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị ga-enye gị ụdị ụlọ ahịa ndị yiri ya.
2: N'ebe nkwari akụ Rayagada na Jeypore, ọ dịghị ụlọ ahịa ọmarịcha na ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ. E nwere naanị Ụkpụrụ na mmefu ego AC / Ụlọ ndị yiri ya.
Ịkwụ ụgwọ ụtụ isi obodo na ikike ịgba akwụkwọ
Ndị 02-03 Ndị Dzire
04 mmadụ Etios
Ndị 06 ndị mmadụ
08-10 Ndị mmadụ oge Tempo
Otu ulo oru AC na Bhubaneswar n'ehihie
Ebe obibi ulo abalị abụọ na Puri na nri ụtụtụ
Otu ulo oru AC na Gopalpur na nri ụtụtụ
Enwe ụlọ AC na abalị atọ na Rayagada na nri ụtụtụ
Ebe obibi anọ anọ AC na Jeypore na nri ụtụtụ
Ebe obibi ulo abalị abụọ na Vishakhapatnam na nri ụtụtụ
Ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri Chilika Barkul
Ihe ncheta maka India naanị.
Ugwo ndi ozo dika ndi ozo
Ihe ọ bụla ekwughị na inclusions